Thwebula mIRC 7.46 – Vessoft
Uhlelo Mirc iyi-IRC client zakudala, okungukuthi, izinhlelo usebenzisa imisele omisiwe ukuxhumana nozakwabo, abangane nomndeni. Ngamanye amazwi, udala inethiwekhi ye IRC – uhlobo indawo lapho ingxoxo real-time can abantu abane-Internet. Lena akuyona nje okuxhumana ezimbili ngendlela, kodwa ingxoxo real online, okuyinto iyoba khona lezo kuphela abantu ofuna ukubona. Ngokusho nezibalo, lolu hlelo Mirc ezisetshenziswa izigidi zabantu emhlabeni wonke, wakhetha nje ngendlela ukuxhumana kunoma yimuphi. Bhekana ukufakwa iklayenti akunzima, ngisho nalabo sihlangana okokuqala nge izinhlelo ezinjalo. Ukusebenzisa Mirc ungagcina traffic Inthanethi, ekusebenzelaneni inani elikhulu labantu.
Ukuqashelwa inkulumo, kulandele synthesis layo nge imikhiqizo third-party
Ikhono ukuhlobisa umbhalo ngosizo ekhethekile Mirc-amakhodi
Ukwehluleka ukulanda amafayela ezinonya kwinethiwekhi
Amazwana on mIRC:
mIRC Ahlobene software:
English, Afrikaans, Français, Español... Seaside Multi Skype Launcher 1.23
English, Español, 中文, 日本語... Nero 2017 Classic futhi Nero Burning ROM
-Internet Isiphequluli fast igxile ukuphepha nobumfihlo yomsebenzisi. amabhlogo Isofthiwe kumawebhusayithi enonya, spyware futhi ikuvumela ukuba ukuxhuma izandiso.